China Yakabatana gorosi furawa kugadzira uye fekitori Chinatown
Muchikamu chekutsvaira, tinotora kuomesa mhando yekuchenesa technology.it inowanzo sanganisira 2 nguva kupepeta, ka2 kurova, 2times kubvisa-matombo, imwe nguva kunatsa, kanokwana kuita kushuvira, ka1 kusvika ka2 kunyorova, katatu kupatsanura kwemagineti zvichingodaro. Muchikamu chekuchenesa, pane akati wandei masisitimu eanoshuvira ayo anogona kudzora guruva rekusasa-kubva mumushini uye chengetedza nzvimbo yakanaka yekushanda Iyi ndiyo yakaoma yakaoma kuyerera pepa iyo inogona kubvisa yakawanda yeakaomesesa offal, yepakati saizi offal uye yakanaka offal Chikamu chekuchenesa hachikwanisi gorosi rinotengeswa kunze nehunyoro hwakadzika uye zvakare rakakodzera gorosi rakasviba kubva kune vatengi vemuno.
Muchikamu chekugaya, pane mhando ina dzehurongwa hwekugaya gorosi kuti rive hupfu. Iwo ari 4-Break system, 7-Kuderedza system, 1-Semolina system uye 1-Muswe system. MaPurifiers akagadzirirwa zvakanyanya kuti uwane yakachena semolina yakatumirwa. kune Reduction iyo inovandudza hupfu mhando nemahombekombe akakura. Iwo maRoller ekudzikisira, Semolina, uye Muswe masystem ari akatsetseka anotenderera ayo akanyatsoputika.Ise dhizaini inochengetedza mashoma mabara akasanganiswa mukati meiyo bran uye furawa gohwo yakawedzerwa. iyo yakanyatsogadzirirwa pneumatic yekusimudza system, iyo yose chigayo zvinhu inotamiswa neHome kumanikidza fan.Iyo yekugaya imba ichave yakachena uye yakachena kuitira aspiration kugamuchirwa.
Muchikamu chino, isu tinopa magetsi ekudzora kabati, chiratidzo tambo, tambo tambo uye tambo tera manera, uye mamwe emagetsi installaton mativi. Chiteshi uye mota yemagetsi tambo haina kusanganiswa kunze kwevatengi vanonyanya kudiwa. PLC yekudzora system isarudzo yekusarudzika kumutengi. Mune PLC yekudzora system, ese michina inodzorwa neProceded Logical Controller iyo inogona inishuwarenzi iyo mahinery ichimhanya zvakatsiga uye zvakatsetseka.iyo system ichaita mamwe kutonga uye kuita zvinoenderana kana chero muchina uri mukukanganisa kana kumiswa zvisina kujairika.Nenguva imwechete ichaita alarm uye yeuchidza iye opareta kugadzirisa zvikanganiso.Schneider dzakateedzana zvikamu zvemagetsi zvinoshandiswa mune yemagetsi kabati.Plc brand ichave Nokia, Omron, Mitsubishi uye nedzimwe nyika Brand.Mubatanidzwa weyakanaka dhizaini uye yakavimbika magetsi zvikamu inochengetedza iyo yose chigayo. kumhanya zvakanaka.
Moded Unyanzvi (t / 24h) Roller Mill Moded Sifter Muenzaniso Nzvimbo LxWxH (m)
CTWM-40 40 Chinyorwa Twin Sifter 30X8X11
CTWM-60 60 Chinyorwa Twin Sifter 35X8X11
CTWM-80 80 Pneumatic Ronga Sifter 38X10X11
CTWM-100 100 Pneumatic Ronga Sifter 42X10X11
CTWM-120 120 Pneumatic Ronga Sifter 46X10X11
CTWM-150 150 Pneumatic Ronga Sifter 50X10X11